प्रोटीन पाउडर को Best सर्वश्रेष्ठ प्रकार - शा Shang्के केमिकल
प्रोटीन पाउडर को Best सर्वश्रेष्ठ प्रकार
L. ल्याक्टोपेरोक्सीडेस (LP)
I.इम्यूनोग्लोबुलिन जी (आईजीजी)
L. ल्याक्टोफेरिन (LF)
प्रोटिन के हो?
प्रोटीन शरीरभरि पाइन्छ। मांसपेशी, हड्डी, छाला, कपाल, र लगभग सबै शरीरको अ body्ग वा टिश्यूमा। यसले इन्जाइमहरू बनाउँदछ जसले धेरै रसायनिक प्रतिक्रियाहरूलाई शक्ति दिन्छ र तपाईंको रक्तमा अक्सिजन बोक्ने हेमोग्लोबिन। कम्तिमा १०,००० बिभिन्न प्रोटीनहरूले तपाइँलाई के बनाउँछ र तपाइँ त्यस्तै राख्नुहुन्छ।
प्रोटीन ऊर्जा प्रदान गर्दछ र तपाइँको मुड र संज्ञानात्मक समारोह समर्थन गर्दछ। यो शरीरमा तन्तुहरू, कोषहरू, र अंगहरू निर्माण, मर्मत, र मर्मतको लागि आवश्यक एक महत्त्वपूर्ण पोषक हो।
प्रोटीन पाउडर के हुन्?
प्रोटीन पाउडरहरू जनावर वा बोटबिरुवाको खाना, जस्तै डेरी, अण्डा, चामल वा मटरबाट प्रोटिनको केन्द्रित स्रोत हुन्। प्रोटीन पाउडर विभिन्न स्रोतबाट आउँदछ र धेरै प्रकारका फर्म्युलेसनमा उपलब्ध छन्। व्यक्तिहरूले मांसपेशीहरूको बृद्धि गर्न, समग्र शरीर संरचना सुधार गर्न र उनीहरूको प्रोटीनको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि प्रयोग गर्दछन्.
तर कुन प्रकारको प्रोटीन पाउडर उत्तम छ?
त्यहाँ त्यहाँ धेरै प्रकारका प्रोटीन पाउडर विकल्पहरू छन्, यसले कहिलेकाँही भारी महसुस गर्न सक्छ। यहाँ प्रोटिन पाउडरको best उत्तम स्रोतहरू छन्।
अल्फा-ल्याक्टल्ब्युमिन एक प्राकृतिक मट्ठा प्रोटीन हो जुन सबै आवश्यक र ब्रान्चेड-चेन अमीनो एसिड (बीसीएए) को स्वाभाविक रूपमा उच्च सामग्री समावेश गर्दछ, जसले यसलाई अद्वितीय प्रोटीन स्रोत बनाउँदछ। अल्फा-ल्याक्टल्बुमिनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एमिनो एसिडहरू ट्रिपटोफन र सिस्टिन हुन्, सँगै बीसीएएहरू; ल्यूसिन, आइसोल्युसिन र भेलिन।
बीटा-ल्याक्टोग्लोबुलिन (ß-ल्याक्टोग्लोबुलिन, BLG) रुमेन्ट दुधमा रहेको प्रमुख मट्ठा प्रोटीन हो र अन्य जनावरहरूको दुधमा पनि रहेको छ, तर यो मानव दुधमा फेला पर्दैन। बीटा-ल्याक्टोग्लोबुलिन एक lipocalin प्रोटीन हो, र धेरै हाइड्रोफोबिक अणुहरू बाँध्न सक्छ, तिनीहरूको यातायात मा एक भूमिका सुझाव। β-ल्याक्टोग्लोबुलिन पनि siderophores मार्फत फलाम बाँध्न सक्षम देखाइएको छ र यसैले रोगजनकहरूको प्रतिरोध गर्न मा एक भूमिका हुन सक्छ। act-ल्याक्टोग्लोबुलिनले विभिन्न प्रकारका कार्य र पौष्टिक सुविधाहरू प्रस्तुत गर्दछ जसले यस प्रोटीनलाई धेरै खाना र जैव रसायनिक अनुप्रयोगहरूको लागि एक बहुमुखी घटक सामग्री बनाएको छ।
ल्याक्टोपेरोक्सीडेस एक प्राकृतिक इन्जाइम हो जुन प्राय: स्तनपायीहरूका दुधमा पाइन्छ, साथसाथै शरीरका अन्य तरल पदार्थहरू जस्तै आँसु र लार। यसले उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्छ, हाइड्रोजन पेरोक्साइडको हाइपोथियोसायनिस एसिडमा थिओसाइनेट आयनहरूलाई ऑक्सीकरण। एसिड दुधमा विघटन गर्दछ र हाइपोथियोसाइनेट आयनहरूले ब्याक्टेरियाहरूको चयापचय एंजाइमहरूलाई निष्क्रिय पार्न सफीड्रिल समूहहरूको साथ प्रतिक्रिया गर्दछन्। यसले ब्याक्टेरियालाई गुणा गर्नबाट रोक्छ र कच्चा दूधको स्वीकार्य गुणस्तरलाई विस्तार गर्दछ।
ल्याक्टोपेरोक्सीडेस antimicrobial र antioxidant गुणहरु को रूपमा परिचित छ। जर्नल अफ एप्लाइड माइक्रोबायोलोजीमा प्रकाशित अनुसन्धानका अनुसार यसमा एन्टिबैक्टेरियल गुणहरू छन् जुन छालाका लागि उपयोगी छ र एक्ने-गराउने ब्याक्टेरियाहरूलाई हटाउन सक्छ। ल्याक्टोपेरोक्सीडेस यीटिस, फgi्गी, भाइरस र ब्याक्टेरियालाई कस्मेटिक्स र अन्य सौन्दर्य उत्पादनहरूमा बढ्नबाट बचाउन प्रयोग गरिने तत्त्वहरूको संयोजनमा पनि एक महत्त्वपूर्ण घटक हो।
ल्याक्टोपेरोक्सीडेस एन्टि-माइक्रोबियल गतिविधि सहितको ग्लाइकोप्रोटीन हो, यो स्थिरिकरण कम्पोनेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ स्थिरता स्थिरता र उत्पाद शेल्फ-लाइफ सुधार गर्न।
इम्युनोग्लोबुलिन जी (आईजीजी) रगत (प्लाज्मा) मा सब भन्दा प्रचुर मात्रामा एन्टिबडी आइसोटाइप हो, मानव इम्युनोग्लोबुलिन (एन्टिबडी) को -०- for70% को लागी। आईजीजीले हानिकारक पदार्थहरूलाई डिटोक्सिफाइ गर्दछ र ल्युकोसाइट्स र म्याक्रोफेजहरूद्वारा एन्टिजेन-एन्टिबडी जटिलहरूको पहिचानको लागि महत्त्वपूर्ण छ। आईजीजी प्लेसेन्टा मार्फत भ्रुणमा सार्छ र शिशुलाई बचाउँछ जबसम्म यसको आफ्नै प्रतिरक्षा प्रणाली कार्यात्मक हुँदैन।
इम्यूनोग्लोबुलिन रोगजनक सूक्ष्मजीवहरू र विषालु पदार्थहरूमा बाँधेर एन्टिबडीहरू बनाउन सक्छ जसले वयस्क प्रणालीको प्रतिरक्षा क्षमता सुधार गर्न सक्छ।
ल्याक्टोफेरिन मानव र गाईको दुधमा स्वाभाविक रूपमा पाइने प्रोटीन हो। यो शरीरमा अरू धेरै तरल पदार्थहरू जस्तै लार, आँसु, बलगम र पित्तमा फेला पर्दछ। ल्याक्टोफेरिन कोलोस्ट्रममा उच्च मात्रामा फेला पर्दछ, बच्चाको जन्म पछि पहिलो पटक स्तन दुध उत्पादित हुन्छ। शरीरमा ल्याक्टोफेरिनको मुख्य कार्यहरू साथ बाँधेर फलामको ढुवानी समावेश गर्दछ। यसले संक्रमणहरूसँग लड्न पनि मद्दत गर्दछ।
Lactoferrin स्तनपान गराएका शिशुहरूका लागि प्रतिरक्षा कार्यहरूमा वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण छ। यसले मानव शिशुहरूलाई जीवाणुरोधी र प्रतिरक्षा समर्थन गर्ने गतिविधि प्रदान गर्दछ। LF यसको उच्च antimicrobial गतिविधि को कारण, म्यूकोसल स्तरमा रक्षाको लागि जिम्मेदार प्रतिरक्षा प्रणालीको एक अंश हो।
ल्याक्टोफेरिन र ल्याक्टोफेरिन सप्लीमेन्टहरू विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिएको छ। केही व्यक्ति ल्याक्टोफेरिन सप्लीमेन्ट्स लिन्छन् एन्टिआक्सीडन्ट र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी लाभहरू लिन।
औद्योगिक कृषिमा ल्याक्टोफेरिन पाउडर मांसको प्रसंस्करणको बेला ब्याक्टेरिया मार्न प्रयोग गरिन्छ।
मार्कस सी, ओलिभियर बी, Panhuysen जी, एट अल। बोवाइन प्रोटीन अल्फा-ल्याक्टल्बुमिनले ट्रिप्टोफनको प्लाज्मा अनुपातलाई अन्य ठूलो तटस्थ एमिनो एसिडमा बृद्धि गर्दछ, र कमजोर विषयहरूमा ब्रेन सेरोटोनिन गतिविधि बढाउँदछ, कोर्टिसोल एकाग्रता कम गर्दछ, र तनावमा मुड सुधार गर्दछ। Am J Clin Nutr 2000; (१ ((): १71-१-6।।
बीटा-ल्याक्टोग्लोबुलिन रेटिनोल र फ्याटी एसिडहरूको अन्तर्क्रिया र यस प्रोटीनको लागि सम्भावित जैविक समारोहको रूपमा यसको भूमिका: एउटा समीक्षा।Pérez MD et al। J डेअरी साइ। (१ 1995 XNUMX))
पॉलीस्टीरिन न्यानोपार्टिकल्सको सतहमा बीटा-ल्याक्टोग्लोबुलिनको उल्टो: प्रयोगात्मक र कम्प्युटेसनल दृष्टिकोणहरू। मिरियानी एम एट अल। प्रोटीन्स। (२०१ 2014)
इम्शन-बाउन्ड बोवाइन बीटा-ल्याक्टोग्लोबुलिनमा संरचनात्मक परिवर्तनहरूले यसको प्रोटिओलिसिस र इम्युनोरएक्टिविटीलाई असर गर्दछ। मारेन्गो एम एट अल। बायोचिम बायोफिज एक्टि। (२०१ 2016)
डुअल ऑक्सीडेसस र ल्याक्टोपेरॉक्सीडेसको एन्टिमाइक्रोबायल कार्यहरू। सार डी डी एट अल। J माइक्रोबायोल। 2018 J डेयरी Res (२०१ 2018)
ल्याक्टोपेरॉक्सीडेस, एक एन्टिमाइक्रोबियल मिल्क प्रोटीन, स्तन क्यान्सरमा कार्सिनोजेनिक हेटरोसाइक्लिक एमिनेसको सम्भावित एक्टिभेटरको रूपमा। शेख आईए एट अल। एन्ट्यान्सर रिज (२०१ 2017)
ल्याक्टोफेरिन युक्त इम्युनोकोम्प्लेक्सले ट्यूमर सम्बद्ध म्याक्रोफेजलाई M1 फेनोटाइपमा रिसेट गरेर एन्टिट्यूमर प्रभावहरू मध्यस्थता गर्दछ। डोong एच, याang वा, गाओ सी, सन एच, वाang्ग एच, ह Hong्ग सी, वाang्ग जे, गोong्ग एफ, गाओ एक्सजे इम्युनोथ क्यान्सर। २०२० मार्च
एक बोवाइन ल्याक्टोफेरिन-व्युत्पन्न पेप्टाइडले ओस्टियोब्लास्ट प्रसार र भेदभावको नियमन मार्फत ओस्टियोजेनेसिस प्रेरित गर्‍यो। शि पी, फ्यान एफ, चेन एच, जू जेड, चेंग एस, लु डब्लू, डु एमजे डेयरी साइ। २०२० मार्च १
ल्याक्टोफेरिनको एन्टी-क्यान्सर गुणहरू: सुरक्षा, चयनता र कार्यको विस्तृत श्रृंखला। कुटोन ए, रोजा एल, इआनिरो जी, लेपान्टो एमएस, बोनाकोर्सी डि पट्टी एमसी, भलेन्टी पी, मुस्की जी। बायोमोलिकल्स। २०२० मार्च १
नवजात शिशुमा ल्याक्टोफेरिनको क्लिनिकल परीक्षण: संक्रमण र पेटको सूक्ष्मजीवमा प्रभाव।एम्बलटन एनडी, बेरिंगटन जेई नेस्ले न्युटर ईन्स्ट वर्कशप सेर। २०२० मार्च ११